Yakavanzika Policy | Yekuziva Rethink - Mitengo
Isu tinoshandisa Ezoic kupa maitiro uye analytic masevhisi pane ino webhusaiti, sezvo yakadaro Ezoic's zvakavanzika mutemo uri kushanda uye unogona kuongororwa ne nekudzvanya apa .
Pano pa www.shoplunachics.com, kuvanzika kwevashanyi vedu kwakanyanya kukosha kwatiri. Iri gwaro repamutemo rekuvanzika rinotsanangura mhando dzemunhu ruzivo rwunogamuchirwa uye kuunganidzwa newww.shoplunachics.com uye mashandisiro ainoita.
Kunge mamwe maWebhu saiti, www.shoplunachics.com inoshandisa mafaira erogi. Ruzivo irworwo mukati megogi mafaira runosanganisira internet protocol (IP) kero, mhando yebrowser, Internet Service Provider (ISP), zuva / nguva chitambi, kutaurisa / kubuda mapeji, uye nhamba yekubaya kuongorora maitiro, manejimendi saiti, kuteedzera kufamba kwemushandisi kutenderedza saiti, uye unganidza ruzivo rwehuwandu. IP kero, uye rumwe ruzivo rwakadai haruna kubatana kune chero ruzivo rwunozivikanwa pachako.
Vamwe vevatinoshamwaridzana navo vanogona kushandisa macookie nemawebhu beacon pane yedu saiti. Vedu vatinoshamwaridzana navo vanosanganisira Google Adsense.
Vatatu vevatengesi, kusanganisira Google, shandisa macookie kushambadzira kushambadza zvinoenderana nemushandisi akashanyira webhusaiti yako.
Kushandiswa kweGoogle cheKukiClick kuki kunoigonesa pamwe nevamwe vayo kushambadzira kune vashandisi vako zvinoenderana nekushanya kwavo kunzvimbo dzako uye / kana mamwe masaiti paInternet.
Vashandisi vanogona kusarudza kushandisa DoubleClick kuki kushambadzira-kwakavakirwa kushanya Zvirongwa zveAdd .
www.shoplunachics.com haina mukana wekudzora kana makuki ayo anoshandiswa nevechitatu-vevashambadzi.
Iwe unofanirwa kubvunza maringe nemitemo yakavanzika yeaya evatatu-bato ad server kuitira kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro avo pamwe nemirayiridzo yekuti ungabude sei pane mamwe maitiro. Aya maratidziro ehupombwe akanyorwa pane Ezoic's yega yekuvanzika mvumo iyo iwe yaunogona kuona nayo nekudzvanya apa .
Mitemo yekuvanzika ye www.shoplunachics.com haishande kune, uye isu hatigone kudzora zviitiko zvevamwe vatengesi kana mawebhusaiti.
Kana iwe uchida kudzima makuki, iwe unogona kuzviita kuburikidza neyako yega browser mabhurawuza. Rumwe ruzivo rwakadzama nezve manejimendi manejimendi ane chaiwo mawebhu mabhurawuza anogona kuwanikwa kune iwo mabhurawuza 'akaringana mawebhusaiti.
Isu takagonesa chimiro neiyo Google Analytics chikuva icho chinopa rumwe ruzivo rwehuwandu kune vamwe vedu vashandisi senge zera, murume kana murume, uye zvido. Hatina mukana wekuwana ruzivo nezve chero munhu wega mushandisi ruzivo chete nezve yedu mushanyi hwaro mune zvese. Kana iwe uchida kusarudza kubva kuGoogle Analytics yekutevera, unogona kuzviita nekushanyira iyo Google webhusaiti pano .
Paunosaina kune imwe yematsamba pawww.shoplunachics.com, yako email kero ichagadziriswa needu email email Pepo Campaigns. Kuti uverenge zvakawanda nezvekuti vanochengeta sei data rako, ndapota tarisa kune yavo yekuvanzika mutemo ne nekudzvanya apa .
Iwe unogona kukumbira kuti tibvise yako email kubva kune edu anotinyorera runyorwa kuti iwe usazogashira edu maemail nekudzvanya pane kusazvinyora link iyo inogona kuwanikwa pazasi peese email yatinotumira. Neimwe nzira, pindura kuemail neshoko rekuti MIRA uye isu tinobvisa yako email kubva kune edu anotinyorera runyorwa
Hatife takatengesa yako data kune wechitatu bato, asi isu tinochengetera kodzero yekukutumira iwe kushambadzira zvinopihwa kubva kune wechitatu mapato.
Facebook, Twitter, uye mamwe mabhatani enethiwekhi
Ino webhusaiti inopa mabhatani ekugovana emamwe anonyanya kufarirwa masocial network kusanganisira Facebook, Twitter, uye Pinterest. Kudzvanya chero eaya mabhatani kunongobvumidza iwe kuti ugovane peji rauri kushanyira parizvino pasocial network account. Paunenge uchidzvanya bhatani, iwe uchaendeswa kune yakatarwa social network. Isu hatiunganidze kana kugadzirisa chero dhata rako pachako kuburikidza nemabhatani aya
kusanganidzana maziso nemaziso zvinorevei
ane barry gibb ane vana vangani
maratidziro aungaita mukomana wako
ndiri kuwirirana nemurume wangu here
Kuchengetwa kwedickick manera machisi